ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ဖကျဒရယျ အပိုငျး (၇၅) – Network Media Group
“စိတျမပြျောဘူးလေ။ စိတျမကောငျးဘူး။ ဆှမြေိုးတှေ မွဈကွီးနားတို့ နမ်မတီးတို့မှာရှိတယျ။ သှားရငျလညျး ရှကျတယျ။ ပိုကျဆံလညျးမရှိဘူးလေ။ ကမြသှားရငျ ပိုကျဆံလာတောငျးသလားဆိုပွီး။ တောငျးစားဖို့လာ သလားဆိုပွီးထငျမှာ ဆိုးလို့ မသှားဘူး လုံးဝမသှားဘူး။ ဆှမြေိုးတှေ အိမျတောငျမသှားခငျြဘူး စဈရှောငျ ဖွဈသှားလို့။” ဒျေါလဖိုငျဒှဲရျော ကခငျြစဈရှောငျအမြိုးသမီး
“ညီမလေးတို့က ကြောငျးက တဈကြောငျးထဲပဲရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ညီမလေးတို့က စဈရှောငျဆိုပွီးမှ သကျသကျခှဲထားတယျ။ သူတို့ကခှဲခွားသလိုမြိုး ဖွဈတယျလို့ ပွောရမှာပေါ့နျော။ ကြောငျးအုပျကွီးက လညျး သကျသကျဟုတျတယျ။ ညီမလေးတို့က စဈရှောငျဆိုတဲ့ ကြောငျးမှာပဲ နရေတယျ။ ကှာခွားတာ တော့ ပညာသငျကွားမှုတို့ ဘာတို့၊ ဆရာမတို့ရဲ့ ဂရုစိုကျလေးစားမှုတို့ နညျးနညျးလိုအပျတယျလို့ ထငျပါ တယျ။ ညီမလေးတို့က တဈမြိုးကွီးတော့ ခံစားရတယျ။ အားငယျသလိုလိုပဲ ခံစားရတယျ။ ဒီလိုမြိုး စဈ ရှောငျ မဖွဈတုနျးကတော့ အကုနျလုံးက တနျးတူပဲ၊ ခှဲခွားဆကျခံမှု သိပျမရှိဘူး။ အားငယျတဲ့သဘော လညျး သိပျမခံစားဖူးဘူး။ အခုဒီမှာရောကျပွီးမှညီမလေးတို့က အရမျးအားငယျတယျ။ ခေါနျနနျ မိုငျးနား RC စဈရှောငျစခနျး (၈ တနျး ကြောငျးသူ)
ကခငျြစဈရှောငျတှရေဲ့ ၉ နှဈတာအတှငျး ဘာတှေ ကွုံနရေသလဲ…?
နှဈတှကွောလာတာနဲ့ အမြှ စားနပျရိက်ခာထောကျပံ့မှုတှေ လြော့နညျးလာတဲ့ ကခငျြစဈရှောငျတှရေဲ့ အခကျအခဲ
စဈရှောငျတှအေနနေဲ့ အသကျအရှယျမရှေး တူညီတဲ့ခံစားမှုကတော့ ခှဲခွားခံနရေတဲ့ဆိုတဲ့ အခွအေနေ
တိုကျပှဲတှနေဲ့ စဈရေးပဋိပက်ခတှအေပျေါ သူတို့ရဲ့ အမွငျ
ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးမှုတှအေပျေါ သူတို့ရဲ့ သဘောထား
ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး ကဏ်ဍတှေ ဆုံးရှုံးနရေတဲ့အပွငျ စဈရှောငျတှေ အားလုံးဟာ အနာဂတျမဲ့ နသေလိုမြိုးခံစားနကွေရတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးတှကေို စုစညျး တငျဆကျထားပါတယျ။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖက်ဒရယ် အပိုင်း (၇၅)
“စိတ်မပျော်ဘူးလေ။ စိတ်မကောင်းဘူး။ ဆွေမျိုးတွေ မြစ်ကြီးနားတို့ နမ္မတီးတို့မှာရှိတယ်။ သွားရင်လည်း ရှက်တယ်။ ပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူးလေ။ ကျမသွားရင် ပိုက်ဆံလာတောင်းသလားဆိုပြီး။ တောင်းစားဖို့လာ သလားဆိုပြီးထင်မှာ ဆိုးလို့ မသွားဘူး လုံးဝမသွားဘူး။ ဆွေမျိုးတွေ အိမ်တောင်မသွားချင်ဘူး စစ်ရှောင် ဖြစ်သွားလို့။” ဒေါ်လဖိုင်ဒွဲရော် ကချင်စစ်ရှောင်အမျိုးသမီး
“ညီမလေးတို့က ကျောင်းက တစ်ကျောင်းထဲပဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ညီမလေးတို့က စစ်ရှောင်ဆိုပြီးမှ သက်သက်ခွဲထားတယ်။ သူတို့ကခွဲခြားသလိုမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့နော်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးက လည်း သက်သက်ဟုတ်တယ်။ ညီမလေးတို့က စစ်ရှောင်ဆိုတဲ့ ကျောင်းမှာပဲ နေရတယ်။ ကွာခြားတာ တော့ ပညာသင်ကြားမှုတို့ ဘာတို့၊ ဆရာမတို့ရဲ့ ဂရုစိုက်လေးစားမှုတို့ နည်းနည်းလိုအပ်တယ်လို့ ထင်ပါ တယ်။ ညီမလေးတို့က တစ်မျိုးကြီးတော့ ခံစားရတယ်။ အားငယ်သလိုလိုပဲ ခံစားရတယ်။ ဒီလိုမျိုး စစ် ရှောင် မဖြစ်တုန်းကတော့ အကုန်လုံးက တန်းတူပဲ၊ ခွဲခြားဆက်ခံမှု သိပ်မရှိဘူး။ အားငယ်တဲ့သဘော လည်း သိပ်မခံစားဖူးဘူး။ အခုဒီမှာရောက်ပြီးမှညီမလေးတို့က အရမ်းအားငယ်တယ်။ ခေါန်နန် မိုင်းနား RC စစ်ရှောင်စခန်း (၈ တန်း ကျောင်းသူ)
ကချင်စစ်ရှောင်တွေရဲ့ ၉ နှစ်တာအတွင်း ဘာတွေ ကြုံနေရသလဲ…?
နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့ အမျှ စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုတွေ လျော့နည်းလာတဲ့ ကချင်စစ်ရှောင်တွေရဲ့ အခက်အခဲ
စစ်ရှောင်တွေအနေနဲ့ အသက်အရွယ်မရွေး တူညီတဲ့ခံစားမှုကတော့ ခွဲခြားခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့ အခြေအနေ
တိုက်ပွဲတွေနဲ့ စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေအပေါ် သူတို့ရဲ့ အမြင်
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေအပေါ် သူတို့ရဲ့ သဘောထား
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး ကဏ္ဍတွေ ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပြင် စစ်ရှောင်တွေ အားလုံးဟာ အနာဂတ်မဲ့ နေသလိုမျိုးခံစားနေကြရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကို စုစည်း တင်ဆက်ထားပါတယ်။